Features - eeg jidka oo ka mid ah hirarka ROM waa muddo xoog
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Features - eeg jidka oo ka mid ah hirarka ROM waa muddo xoog
Ghanna mashiinka Pachinko jabtay kor maamulka ROM oo dhan. Haddii Minukere wajiga xoogan oo ROM ah, jaaniska sare in givin Ghanna ah. Sidaas daraaddeed, haddii ay jiraan waa feature a of wajiga wanaagsan ee ROM, ka dibna si faahfaahsan sharaxaad aad.
ROM waa xoog badan yahay, calaamadaha u fudud in ay ku dhuftay Ghanna ka soo baxa kala duwan. Gaar ahaan, wax soo saarka iyo gaari, isku day in ay diiradda saaraan sida hit. Tusaale ahaan, waa ay gaari iyo waxqabadka, noocyo kala duwan oo soo saarka iyo gaari ama ka dhigi doonaa si joogto ah.
qabatimo ka dib markii
per ayaa joojiyay xitaa ka yar, adiga ama dego marks halkii loogu kalsoonaan karo kulaylka daran gaari karin. Intaa waxaa dheer, waxaad la kulmi-dib la jiido ee hoos waqti, iwm ama dallacsiiyey wareega ah, waxaan u malaynayaa in ay la noqon lahaa muddo xoog leh.
Markaas, in muddada wanaagsan, ama ay u badan tahay in ay dhacaan waa xidhiidhka Chang, sidoo kale waa mid ka mid ah xilliga adag ee socodka kala duwanaansho itimaalka waxaa sii kordheysa soo socda inuu ka Ghanna ah. Tusaale ahaan, halkii ay ka joojiso oo kaliya sababtoo ah uma aan iman weerarada ee saacadaha shaqada ka gaaban, wuxuu ku saabsan yahay 200 Kacdoonkii isku dayaan in ay samir ciyaaro.
hor ordaya sanduuqa kaga bixi, waxa kale oo aad wax u eg laga jari karaa hit weyn, Waxaan u maleynayaa in ay jiraan waxyaalo aad la kulanto. Ku xiga socodka wanaagsan, ma aha qabatimo, haddii ay jiraan wax u eg in ka iman dhuftay joojin isla markiiba in per soo socda, waxaa suuro gal ah muddada xoog leh.
u taagan yihiin muuqaalada sida dhaqaaq, waxa ay noqon doontaa miiska saaran in ay u yimaadaan oo la feature a muddada xoog leh, waxaan u malaynayaa in waxa laga yaabaa in si ula kac ah u ciyaaro isku day.
Markaas, in qowladda pachinko ah, waxaa jira tiradaasi ka mid ah tiro kala ah. model Tani waa immisa noqon doonaa tirada soo if-na tegi by yaraynta macaamiisha. Sidaasaa dukaan pachinko, aad tahay ama xitaa beddelo ciddiyaha qabsiga iyo wixii la mid ah.
kooxda martida pachinko, haddii aadan beddeli halka tirada kala, waxa kale oo aad noqon dhowr maalmood muddo wanaagsan waxaa la socda. wajiga Strong of ROM waa waxa kaliya in si degdeg ah loo arki karaa by ciyaaro on. Waa, haddii aad eegto, gaar ahaan garaafka xogta, fududaan doonta in la sii fahmo.
ugu fiican salka xoog xogta Ma jeclaan lahayd inaad si ay u arkaan waa la ruxruxo ee tirada guud ee Kacdoonkii iyo garaaf line. Tan iyo Ghanna la raaceen, isku day in aad doorato miiska xawaare yar wareeg ah maalintii. Oo in, madal la socda per 200 wareeg ka hor iyo ka dib soo socda ee taagan yar oo qabatimo, ha saaray suurtagalnimada of ruxruxo ah oo xoog leh ayaa la socda in ay duurka ku of view.
ka dib xilliga caadiga ah, si adag u aqoonsadaan xuduudda ah ee nolosha kacsan, sidaas darteed waa muhiim si loo joojiyo at waqtiga in loo kordhiyo kartaa faa'iidada aan maalgashi ku xadgudba.
marka nolosha caadiga ah, ama si ku degdegin inaad murugoodo nolosha waa in la saadaaliyay by, tusaale ahaan, in tixraacayo xogta ee la soo dhaafay. Haddaba, maadaama ay adag tahay in la ogaado oo kaliya in dhaqanka ee miiska aad u ciyaareyso, ayaa si wadajir ah ha la xogta si loo go'aamiyo ka laba dhinac.